जहाँ दलित पुजारीसँग गैरदलितले वर माग्छन् !
ARCHIVE, NEWSPAPER » जहाँ दलित पुजारीसँग गैरदलितले वर माग्छन् !
जातीय विभेदका कारण अधिकांश मन्दिरमा दलितलाई भित्र पस्न दिइँदैन । उनीहरूले परैबाट देउताको दर्शन गर्छन् । गैरदलितले मन्दिरबाहिर ल्याइदिएको टीका र प्रसाद मात्र उनीहरूले पाउँछन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
हरेक दुई वर्षको वैशाख पूर्णिमा मेलामा गौतम बन्धुहरूको कुलपूजा हुन्छ । तर, आश्चर्य दलित समुदायको भन्दा दोब्बर बलि गैरदलितले चढाउँछन् । ‘हातमा बोका डोहोर्याउँदै आएको देख्दा अचम्म लाग्छ,’ स्थानीय कांग्रेस नेता रमेश बुढाले भने, ‘धर्म र आस्था महत्वपूर्ण रहेछ ।’ यसपालिको मेलामा मात्रै ब्राह्मण, क्षेत्रीलगायत अन्य समुदायका करिब दुईध सय पाठा बलि चढेका थिए ।